Akụkọ Bible: Ebreham—Enyi Chineke - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
OTU n’ime ebe ndị ụmụ mmadụ gara biri mgbe Iju Mmiri ahụ gasịrị bụ ebe a na-akpọ Ọọ. Ọ ghọrọ ebe a ma ama nke nwere ọmarịcha ụlọ obibi. Ma ndị ebe ahụ na-efe chi ụgha. Otú ahụ ka ndị biri na Bebel mere. Ndị obodo Ọọ na Bebel eyighị Noa na nwa ya Shem, bụ́ ndị nọgidere na-efe Jehova.
N’ikpeazụ, narị afọ atọ na iri afọ ise ka iju mmiri ahụ gasịrị, Noa, bụ́ nwoke kwesịrị ntụkwasị obi, nwụrụ. Ọ bụ naanị afọ abụọ mgbe nke a gasịrị ka a mụrụ nwoke nke ị na-ahụ na foto a. Ọ bụ onye pụrụ iche n’anya Chineke. Aha ya bụ Ebreham. Ya na ezinụlọ ya biri n’obodo Ọọ ahụ.
Otu ụbọchị, Jehova gwara Ebreham, sị: ‘Hapụ Ọọ na ndị ikwu gị, gaakwa n’otu ala nke M ga-egosi gị.’ Ebreham ò gere Chineke ntị wee hapụ ihe ọma niile dị na Ọọ? Ee, o gere ntị. Ọ bụkwa n’ihi na Ebreham rubeere Chineke isi mgbe niile ka e ji mara ya dị ka enyi Chineke.
Ụfọdụ ndị ezinụlọ ya sooro ya mgbe ọ hapụrụ Ọọ. Nna ya bụ́ Tira sooro ya. Lọt nwa nwanne ya sokwa ya. Otú ahụkwa ka Sera nwunye ya mere. Ka oge na-aga, ha ruru otu ebe a na-akpọ Heran, bụ́ ebe Tira nọ nwụọ. Ha nọ ebe dị anya site na Ọọ.
Mgbe nwa oge gasịrị, Ebreham na ezinụlọ ya hapụrụ Heran jee ala a na-akpọ Kenan. N’ebe ahụ, Jehova gwara ya, sị: ‘Nke a bụ ala m ga-enye ụmụ gị.’ Ebreham nọrọ na Kenan ma biri n’ụlọ ntu.
Chineke malitere inyere ya aka, o wee nwee oké ìgwè atụrụ na anụ ndị ọzọ nakwa ọtụtụ narị ndị ohu. Ma ya na Sera amụtaghị nwa ọ bụla.
Mgbe Ebreham dị afọ iri itoolu na itoolu, Jehova sịrị ya: ‘Ana m ekwe gị nkwa na ị ga-abụ nna nke ọtụtụ mba.’ Ma olee otú nke a ga-esi mee ebe ọ bụ na Ebreham na Sera emeela agadi ugbu a ma gafee oge ịmụ nwa?
Jenesis 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.
Olee ụdị ndị biri n’obodo Ọọ?
Ònye nọ na foto a, olee mgbe a mụrụ ya, ebeekwa ka o biri?
Gịnị ka Chineke gwara Ebreham ka o mee?
N’ihi gịnị ka e ji kpọọ Ebreham enyi Chineke?
Olee ndị sooro Ebreham mgbe ọ hapụrụ Ọọ?
Gịnị ka Chineke gwara Ebreham mgbe o rutere n’ala Kenan?
Olee nkwa Chineke kwere Ebreham mgbe ọ dị afọ 99?
Gụọ Jenesis 11:27-32.
Olee otú Ebreham na Lọt si bụrụ ụmụnne? (Jen. 11:27)
Ọ bụ ezie na e kwuru na ọ bụ Tira kpọọrọ ezinụlọ ya gaa Kenan, olee otú anyị si mara na ọ bụ Ebreham n’ezie malitere njem ahụ, n’ihi gịnịkwa ka o ji mee otú ahụ? (Jen. 11:31; Ọrụ 7:2-4)
Gụọ Jenesis 12:1-7.
Mgbe Ebreham ruru n’ala Kenan, olee otú Jehova si mee ka ọgbụgba ndụ ya na Ebreham gụnyekwuo ọtụtụ ndị? (Jen. 12:7)
Gụọ Jenesis 17:1-8, 15-17.
Olee otú e si gbanwee aha Ebram mgbe ọ dị afọ 99, ọ̀ bụkwa n’ihi gịnị? (Jen. 17:5)
Olee otú Jehova kwere nkwa isi gọzie Sera n’ọdịnihu? (Jen. 17:15, 16)
Gụọ Jenesis 18:9-19.
Na Jenesis 18:19, olee ọrụ e nyere ndị bụ́ nna? (Deut. 6:6, 7; Efe. 6:4)
Olee ihe mere Sera nke na-egosi na anyị apụghị izochiri Jehova ihe ọ bụla? (Jen. 18:12, 15; Ọma 44:21)
Gịnị Ka Anyị Nwere Ike Ịmụta n’Aka Ebreham?
Olee otú Ebreham si kpaso ndị ọzọ àgwà obiọma? Danloduo foto a e ji akụzi ihe, gụọkwa akụkọ a na Baịbụl ka ị mata.